Fifidianana · Mey, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Mey, 2018
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Mey, 2018
Amerika Avaratra 28 Mey 2018
Araka izany, bandy roalahy no tonga avy any mba hofidianareo. Ny iray tsy dia mitovy loatra aminareo, somary tanora, milaza aminareo hoe ananany daholo ireo hevitra goavana ho entina mandamina ny zavatra rehetra, fa miteny koa izy hoe mila mitondra ny anjara birikinareo koa ianareo mba hampandeha tsara an'izany. (Etazonia 2008)
Tsy misy akory ny tena fiovàna marina ary dia voafandrika ao anaty lavaka mangitsokitsoka izay nohadian'ny mpanao politika sangany izahay ; nampiasainy ny fahefany mba handaniana ny lalàna hiantohana ny fijanonan'ny antoko lehibe ao amin'ny governemanta ary hahafahany hanohy hatrany ny fomba ratsiny : ny kolikoly. Tsy omeny , na dia vintana kely fotsiny aza, ny mpifidy mba hanala aminy ny fahefàny.